Amathiphu ayi-6 aphezulu we-franchise yomhlaba wonke ephumelelayo | I-Franchiseek
»Izeluleko ezi-6 eziphezulu ze-franchise yomhlaba ephumelelayo
Ngakho-ke, ucabanga ukuqala i-master master franchise? Bese kunezinto ezimbalwa okufanele uzicabangele kuqala. Ngokwe-Reference for Business Encyclopaedia, i-franchise entsha ivulwa njalo ngemizuzu eyisishiyagalombili emhlabeni jikelele. Ekungeneni emakethe yomhlaba njenge-franchisor, lapho-ke, kunokuncintisana okuningi kakhulu ukuhlangabezana nakho.
Kulokhu okuthunyelwe, sizobheka amanye amathiphu aphezulu okuphumelela emhlabeni we-franchise world, nokuthi ungaziguqula kanjani lezo amathuba we-franchise ebhizinisini elinenzuzo kubo bonke abathintekayo.
Iyini i-franchise yomhlaba?
Eyaziwa nangokuthi i-franchise yamazwe ngamazwe, i-franchising yomhlaba wonke isho ukuthengiswa kwelungelo lokuphinda ifomethi yebhizinisi ezimakethe zangaphandle. I-franchisor, umuntu onikeza ilayisense ibhizinisi, uzonikeza umnikazi welungelo amandla okusabalalisa imikhiqizo nokusungula izikhungo ngokusetshenziswa kwamalungelo enkampani obuhlakani bengqondo.
Ngo-2018, ama-39% wabathengisi bezitolo zokudlela abakhulu abangama-200 ayesebenza emazweni omhlaba. Imakethe ikhula ngokushesha futhi inikeza amabhizinisi ithuba lokwandisa ukutholakala kwawo komkhiqizo ezingeni lomhlaba jikelele.
I-franchisee ne-franchisor inobudlelwano obusondelene, njengoba i-franchisee ikhokha isethi yezimali ezahlukahlukene kubandakanya imali yokuthengisa neyokukhangisa ku-franchisor. Ungasebenzisa i-direct, futhi master franchising izivumelwano ezimakethe zomhlaba jikelele kanye nesivumelwano samazwe ngamazwe se-franchise ngokujwayelekile kuzolawula ukusebenza kwazo.
I-1. Yenza ucwaningo lwakho
Uma kukhulunywa ngokunwebeka kube yimakethe yomhlaba, udinga ukuyiphatha njengokuzibandakanya okusha. Yenza ucwaningo lwakho ngamasiko endawo nezinto ozithandayo, thola ngemithetho yezwe yokuqashwa kanye nokuholwa kwabakwa-HR, bese unquma ukuthi indawo engcono kakhulu ye-franchise yakho izoba kuphi.
Isibonelo, ama-80% ama-franchise ase-UK aphethwe futhi athuthukiswa ngaphakathi ezweni. Ingabe kunjalo nakwezinye izindawo? Kuphi ama-franchise aphumelele kakhulu embonini yakho emakethe yomhlaba?
Cwaninga amanye ama-franchise ezindaweni zakho ezizayo zokunwebisa bese uthola ukuthi iziphi ezibone impumelelo. Uma imakethe isivele igcwele, ngokwesibonelo, kungahle kube khona ama-franchise ayishumi okuqina endaweni, bese ubheka kwenye indawo ukuthola indawo enhle kakhulu.
2. Thola uhlobo oluhle kakhulu lwenkontileka
Njengoba i-franchise yomhlaba wonke ingasebenzisa izivumelwano eziqondile neziyinhloko, kuzodingeka unqume ukuthi yikuphi okuhle kakhulu kumodeli yenkampani yakho.
Izivumelwano eziqondile zama-franchise zibandakanya izinkontileka phakathi kwe-franchiser kanye nomqhubi weyunithi ngayinye ye-franchise. Lolu hlobo lwamalungiselelo lunikeza i-franchiser ukulawula okuningi ekunwetshisweni ngakunye, kepha kungadala umsebenzi omningi waleso sizinda sasekhaya.
Okwamanje, ama-master franchise enza isivumelwano phakathi kwe-franchiser nelinye iqembu elibanikeza ilungelo lokuthenga ngaphansi kwensimu ethile. Yize kungenza ukuqashwa kubize kakhulu, le modeli ingakhiqiza imali engenayo eyengeziwe.
3. Dala ubudlelwano obuzinzile
Lapho usuthole uhlobo lwenkontileka ongathanda ukuyisebenzisa, thola i-franchisee elungele ibhizinisi lakho. Isibonelo, uma ufuna ukwandisa i-franchise yakho yokudla, ukusebenza nomuntu onobuchwepheshe obukwi-plumbing franchise kungathinta izinga lokuphumelela lokwanda kwakho.
Njengoba nobabili nizosebenza emazweni ahlukene, kufanele nakhe ubuhlobo obusebenzayo bokusebenza. Ngale ndlela, ungabheka impumelelo ye-franchise yomhlaba wonke ngezwe ngalinye.
4. Yenza izinhlelo zisebenze
Qala indlela yakho ebheke empumelelweni ngokwenza izinhlelo zakho zihambe. Emabhizinisini amaningi e-franchising, ayikho impendulo efanele, uhlelo lokunweba kuphela olusebenzela wena. Khumbula ukuguquguquka njengoba usebenzisa i-franchise yakho yomhlaba wonke ukuze ukwazi ukuphendula ezinseleleni ezintsha. Kuvule ama-franchise amasha kuphela ngokwezimali zakho.
5. Shintsha ukumaketha kwakho
Usebenzisa ulwazi lwakho lwamazwe onwebela kuwo, kufanelekile ukuguqula amasu akho wokumaketha avumelane nendawo yangakini yokwanda kwakamuva. Kubalulekile ukusungula ukuxhumana kwasendaweni ukuqinisa ubukhona bamabhizinisi akho. Ngakho-ke, beka izikhangiso emaphephandabeni, cela ubufakazi bamakhasimende bese wenza isu lezokuxhumana elisebenzelayo. Ngokuya ngosayizi we-franchise yakho, thola ukuthi ngubani ozoba nesibopho sokumaketha emhlabeni wonke.
6. Hlala isinyathelo esisodwa phambili
Kubalulekile ukuthi uma ibhizinisi lakho selisebenza, uqhubeke ubeke iso elilodwa emncintiswaneni wendawo nasemakethe yomhlaba. Isazi semboni, uSean Kelly, uqokomisa ukuthi 'amanye amaketanga e-franchise anezinga lokwehluleka elifinyelela kuma-80% kuye kuma-90%, kanti amanye awanakho ukwehluleka'. Lezi zibalo zingumphumela wemboni ehlukahlukene yama-franchise enabadlali abaningi bamazwe aphesheya, ngakho-ke sebenzisa izinzuzo zokwenza ibhizinisi lakho libe lusizo ukuze uzuze.
Uma ufuna izeluleko ezengeziwe nge-franchising yomhlaba wonke noma ufuna ukubhekabheka ama-franchise amahle kakhulu athengiswayo, khona-ke i-Franchiseek isiqondisi samazwe ngamazwe sokuthengiselana indawo yakho.